Candy Crush 1532 - Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် / အမျိုးအစား / Candy Crush 1532
ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာအောင်မြင်မှုကိုဘယ်လိုတိုင်းတာသလဲ? ကောင်းပြီ, ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောအလုပ်များကိုစိတ်မပူပါနဲ့ပြီးမြောက်သွားလျှင်အောင်မြင်မှုရစေသောရိုးရှင်းသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ရှုပ်ထွေးမှုရှိသောအခြေအနေများကိုသင်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်. သင်လက်နက်ချမလား? မင်းလုပ်ရင်, ထို့နောက်သင်သည်အောင်မြင်မှု၏ချိုမြိန်မှုကိုမမြည်းနိုင်ပါ. ဒီနေရာမှာသကြားလုံးအရူးအမူးကစားနည်းကသင့်ကိုစမ်းသပ်တာပါ. ၎င်းသည်သင့်အားခက်ခဲသောလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ကျဉ်းပေးပြီးသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတွင်၎င်းတို့ကိုပြီးအောင်လုပ်ရန်တောင်းဆိုသည်.
အလုပ်များကိုလွတ်လပ်စွာမပြီးနိုင်ပါ. ဆိုးဆိုးရွားရွားမှီဝဲနေလျှင်သင်လမ်းညွှန်အချို့လိုအပ်သည်. လူတွေဟာများသောအားဖြင့်မှီဝဲရတာတွေကြားရတယ် Candy Crush 1532 အဆင့်. ထို့ကြောင့်, အဲဒါကိုကျော်လွှားဖို့မဟာဗျူဟာမြောက်ရွေ့လျားမှုလိုအပ်သည်, ကခက်ခဲတဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်အဖြစ်. ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားအကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များကိုသင့်အားကူညီပေးပါမည် Candy Crush 1532 အဆင့်.
တိုင်းသကြားလုံးနှိပ်စက်ခြင်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောရည်မှန်းချက်ရှိပါတယ်. သင်ထိုအဆင့်ကိုအနိုင်ယူချင်လျှင်, သငျသညျထိုရည်မှန်းချက်ကိုဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်. In Candy Crush 1532 ရည်မှန်းချက်ကိုစုဆောင်းရန်ဖြစ်ပါသည် 1 မြေပဲနှင့် 1 ချယ်ရီသီး. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, သင်စုဆောင်းရန်လိုအပ်သည် 75000 မှတ်. ဒါ့အပြင်, 20 ရွေ့လျားသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းဒီအောင်မြင်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်. စုစုပေါင်းရှိပါတယ်5သကြားလုံးနှင့် 59 နေရာလွတ်များ. သငျသညျအညီသင့်ရဲ့ရွေ့လျားစီစဉ်ထားရန်ရှိသည်.
Candy Crush 1532 အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်
မေးခွန်းအမြဲတမ်းသကြားလုံးကြိတ်ခွဲအဆင့်ကိုဘယ်လိုချဉ်းကပ်ရမလဲဆိုတာပဲ? သင့်ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုအစကတည်းကမှမဖြောင့်ပါက, သင်တစ်ချိန်ချိန်မှီဝဲပါလိမ့်မယ်. စတင်ရန်, မင်းရဲ့ကန ဦး လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစီစဉ်ပြီးဒီအဆင့်ကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်.
ပထမဦးစွာ, သင်လိုက်ဖက်သောအရောင်သကြားလုံးများကိုညာဘက်အောက်ထောင့်သို့ယူဆောင်လာသင့်သည်. ဤကိုက်ညီသောအရောင်သကြားလုံးများကိုဖယ်ရှားရန် crusher သကြားလုံးကိုစတင်ပြင်ဆင်ပါ.
သူတို့ဂိမ်းထဲမှာပြန်လာကြလိမ့်မည်အဖြစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများပေါ်ကိုထဲကရွှေ့မသွားပါစေနဲ့. အကျိုးဆက်, သင်တို့သွားရာလမ်းသည်ပျက်လေပြီ
သကြားလုံးတွေကိုချေမှုန်းဖို့သင်ကြိုးစားတိုင်း, သူတို့ရဲ့ညာဘက်ကိုရွှေ့သွားလိမ့်မယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်မှာပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတွန်းအားပေးမည့်အစားအထူးသကြားလုံးများပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်. ဒီအဆင့်မှာပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုထွက်ရန်သင်လိုအပ်သည်. ထို့အပြင်, ဒီပစ္စည်းကထွက်ပြီးဂိမ်းထဲကနေထုတ်ယူတဲ့တယ်လီပို့တာကညာဘက်အောက်နားမှာရှိတယ်.
conveyor belt တိုင်းမှာညာဘက်ပါ. သို့သျောလညျး, ပြန်လာလျှင်မည်သည့်ပစ္စည်းအောက်ခြေဘယ်ဘက်အတန်းမှရိုက်ထည့်ပါလိမ့်မယ်. ဒါ့အပြင်, ပြန်ရောက်လျှင်သင်၏ရွေ့လျားဖြုန်းတီးပါလိမ့်မယ်.
သင်ဤပါဝင်ပစ္စည်းများကိုပယ်ရှားလျှင်, သင်လက်ခံလိမ့်မည် 20,000 မှတ်. ၎င်းသည်ပစ်မှတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်တူညီသည်.
ဤသည်ကိုသင်ဤဂိမ်းချဉ်းကပ်သင့်တယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသင့်လျော်သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလိုအပ်သည်. သငျသညျအစပိုင်းတွင်ကောင်းစွာမစတင်လျှင်သင်ကြံစည်မှုဆုံးရှုံးတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်. ထို့အပြင်, သင်၏ရွေ့လျားမှုသည်အလဟ are ဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကြိုးစားပါ. လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုအဖိုးထိုက်သောကြောင့်သေချာစွာအသုံးပြုသင့်သည်. အကယ်၍ သင်အစီအစဉ်အရပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာသင်ဟာဒီအဆင့်ကိုအနိုင်ရလိမ့်မယ်. နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကိုမှတ်မိပြီးသင့်လျော်စွာရွေ့လျားနေကြောင်းသေချာပါစေ.